TOPINAMBUR KOR U KACA: TIKNOOLAJIYADA BEERAHA IYO SAWIRADA, DHALMADA, IYO SIDOO KALE BEERTO DIGIRTA GURIGA OO KU YAAL AQAL GURI OO KU YAAL BERRIN FURAN IYO HALKA LAGA HELO MIRAHA? - BEER CAGAARAN
Jerusalem artichoke (pear earth) waa mid faa'iido leh, midho dhalaalaya, warshad aan la qabin, digriiga kaas oo loo isticmaali karo cunto ahaan, iyo cagaarka cagaaran ee cuntada xayawaanka.
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee Jerusalem artichoke, waxaad u baahan tahay in la xasuusto in dhirtaas lagu abuuri karo hal meel sannado badan, taas oo aan saameyn doonin dhalidda iyo tayada ciidda, laakiin aagga waa in laga qaadaa si wanaagsan oo iftiimiya dhirta kale, maadaama ay shirkadani ku dhici karto dhaqanka; waxa uu leeyahay iska caabin ah baraf sare, ma aha picky ku saabsan ciidda (ciidda kasta oo ku habboon, marka laga reebo carrada acidifying), waxay u dulqaadataa abaarta si fiican, laakiin leh qoyaan xad-dhaaf ah oo uu ku rusheeyaa.
Sida loo koro pear earthen ah oo ka samaysan digriiga iyo abuurka iyo halka laga helayo, iyo sidoo kale waxa loo baahan yahay si ay ugu koraan guriga iyo sida si habboon u koraan warshad ku taal dhulka si ay u helaan goosashada fiican. Tani iyo wax badan oo kale ayaa lagu sharxi doonaa maqaalkeena.
Sidee loo doortaa darajada saxda ah?
Si aad u doortaan kala duwanaanta saxda ah ee artichoke Yeruusaalem, waxaad u baahan tahay inaad aragto ujeedada ah ee sii kordhaya warshad this:
jajab ahaan loo yaqaan 'element of design of landscape;
isticmaalka bini'aadamka ee cuntada ama xayawaanka.
Ku dhowaad dhammaan noocyada Yeruusaalem ee artichoke ee taranta casriga ah ayaa loogu talagalay helitaanka labada qaybo badan oo kor u-dhulalka geedka, iyo tiro badan oo digriiga ka soo baadiyaha. Noocyada cuntooyinka ayaa la sameeyey, qaabka kala soocida kuwaas oo kor u qaada tuberisida iyo tiro yar oo cagaaran.
Noocyada loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka iyo quudinta xoolaha waxaa lagu gartaa mugga ballaaran ee cagaaran iyo dhalidda hoose ee digriiga.
Kala duwan kasta wuxuu leeyahay sifooyinkiisa, kaas oo laga heli karo miiska.
Magaca dugsiga Wax-soosaarka digriiga halkii mitir labajibbaaran Isugeyn ballaaran oo cagaar ah oo ka yimaada baadiyaha Xilliga is-beddelka, xilli sii kordhaya
Dulsaarka (ku habboon nadiifinta mashiinka) 2.6-3.8 kg 4.3-5.6 kg Biyo-Baaskiil, ma laha wakhti aad ku qaangooshto Qaybta Dhexe
Omsk white 4.3 kg 3 - 3.5 kg Xilliga dhexe (130 maalmood)
Pasko 3 kg 3, 4 kg Late (178-190 maalmood)
Horeeyee (ku habboon nadiifinta mashiinka) 2.5 - 3 kg 3-3.5 kg Hore (120 maalmood), ku haboon beerista aagga dhexe
Sunny 4 kg 3.1 kg Xilliga Guga (152-172 maalmood)
Volzhsky 2 (ku habboon nadiifinta mashiinka) 1, 5 kg 2 kg Hore (100 maalmood)
Vylgothic 1-1.7 kg 3, 4-4,1 kg Hore (125 maalmood)
Leningrad 4.5 -4.9 kg 4-4.2 kg Bisaylkiisa dhexe (140 maalmood)
Falanqaynta isbarbardhiga ee noocyada ayaa muujiyey in hadda Omsk cad iyo Leningradsn ay ka mid yihiin noocyada ugu wanaagsan, maadaama ay ku habboon yihiin beerashada baahsan iyo siin dhalidda sare ee digriiga iyo tiro cagaaran.
Sawirku waxa uu tusinayaa waxa sawir-qaadeha Yeruusaalem u eg yahay.
Xagee iyo intee inaga ayaa la iibsan karaa?
Gobol kasta waxaa ka jira shirkado, ganacsatada gaarka loo leeyahay, kuwa jecel topinambour kuwaas oo ku hawlan abuurida dhirta iyo bixinta wax beerto si loogu iibiyo. Bixinta iibka fudud oo laga helo internetka.
Tusaale ahaan, shirkadda "Ryazan goobaha" laga soo bilaabo magaalada Sapozhok ee gobolka Ryazan ayaa iibiya Jerusalem artichoke ee baakad ah 30 kg, qiimaha kala duwanaanta 5 ilaa 15 rubuc kiilo. Maqaalka Moscow, waxyaabaha la beerto ee Jerusalem artichoke waxaa laga iibsan karaa qiimaha laga bilaabo 27 illaa 35 rubuc kiilo (Gorobets AV, IP, Starominskaya, Cheerful Kryska, IP, Moscow). In St. Petersburg - qiimaha pear laga bilaabo 25 illaa 150 rubuc kiilo (amarka ayaa laga soo qaatay 10 kg), warshadda waxaa iibiya shirkadda "Nation's Health".
Kobcinta dhulka dhulka u furan
Soo degitaanka Jerusalem artichoke waxaa lagu samayn karaa dhul furan iyo gurigaba weelasha. Inta badan, geedka waxaa lagu beeray dhulka u furan sababtoo ah baadiyaha awood leh. Sidee loo dhufan karaa? Koofiyadaha dhulka ayaa lagu faafin karaa laba siyaabood.:
daaqsinka (digriiga, qaybihiisa ama indhaha);
wax soo saar (abuurka, dariiqa dheer, xanaaqa, oo u baahan aqoon gaar ah).
Warshadda waxaa lagu beeray xilliga dayrta (ka fiican gobollada koonfurta ee dalka) 10-15 maalmood ka hor bilawga ah ee barafka iyo guga, marka ciidda kulaalaa 16-18 digrii.
Sidee u koraan digriiga pear ground ee berrinka bannaan?
Dooro meel wanaagsan oo qafiif ah, oo qallalan si looga hortago digriiga qiiqa.
Diyaarso sariirta beerta adoo ku qodaya baakad saaran oo ku dar foosto ama digada lagu beeray.
Ka hor inta laga beerto dalagyada Bacriminta fosfooraska-potassium.
Dooro digriiga waaweyn, digtoon caafimaad qaba (6-8 cm), oo aan lahayn qudhuun iyo waxyeello, oo leh buro dhowr ah.
Kala saar qalabka wax soo saarka leh xal kasta oo difaaca jirka ka difaacaya cudurrada iyo dardar-galinta koritaanka.
Ka samee jeexjeexyada godadka iyo digriiga warshad fogaan ah ugu yaraan 40 cm midba midka kale, iyaga oo dhulka ku daadinaya 7-15 cm, iyadoo ku xiran cabbirka tuber. Loo kaajiray meel isku xigta - 60-70 cm
Ka dib marka ay u muuqdaan sprouts, cirrid sariirta oo si fiican u dabacsan. Qalliinkani saddex goor ha ahaado mudo ah 2 toddobaad.
Khafiif ah dhirta marka ay dhererkoodu gaaro 10 cm: masaafada ugu yar ee dhirta waa 45 cm, inta u dhaxeysa saf - 30 cm.
Caleemaha Spud marka ay gaaraan 20 cm dhererka, iyo ku quudiyaan HOL. (Dhexdhexaadka xagaaga waxaad dib u dhigi kartaa hunqeer iyo caleemo leh humus ama digriiga sanadkii hore).
Xidhaa dhirta oo gaareen dherer mitir si ay u taageeraan xoog.
Si kor loogu qaado dhalidda, gooyo burooyinkeeda ubax ama dhoobo ilaa 1.5 mitir ee dhererka.
Waqtigaan, Jerusalem artichoke wuxuu ku jiraa hooska dalagyada kale, inkastoo xogta biochemical iyo dhalidu ay ka badan tahay tan dhirta caadiga ah. Waxtarka leh dhirta kobcaya ee koraya waxay ka badan tahay 300% qiimaha ugu yar. Tusaale ahaan, dhaqaaleyahannada ayaa ogaaday in si loo soo saaro beer cusub oo cusub oo leh 50 hektar, 812 milyan oo doolar ayaa loo baahan yahay. Tani waa kharashka qiyaasida beerashada. Caddadkan waxaa ku jira kharashka iibsashada qalabka beeraha, iibinta abuurka, Bacriminta organic iyo macdanta, qiimaha shidaalka iyo korontada.
Dabcan, dakhliga ka soo iibinta mass cagaaran iyo digriiga artichoke Yeruusaalem toos ah waxay ku xiran tahay dhalidda iyo qiimaha unugga. Laakiin xitaa waxsoosaarka ugu yar ee cagaarka iyo digriiga (xadka 20 t / ha) soo noqoshada maalgashiga raasumaalka ah ayaa iman doona sanadka ugu horeeya ee abuurista artichoke Yeruusaalem. Warshad waxay soo saari kartaa tiro cagaaran illaa 1000 kg / ha, digriiga - 400 kg / ha!
Kala soocista iyo dhalashada Yeruusaalem artichoke ee qiyaasta warshadaha waa mid faa'iido leh. Beerta Agrotechnical waxay la mid tahay tignoolajiyada baradhada sii kordhaya:
Xilligii dayrta ee hoos u dhacay Yeruusaalem ayaa loo baahan yahay.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado Bacriminta organic, kuwaas oo lagu aasay ciidda dayrta ama gu'ga, taas oo ku xidhan wakhtiga beerto digada.
Waxaa lagu talinayaa in ay ku koraan pear dhoobo on kabaha si ay xaaladaha cimilada dabiiciga ah buulka tuberous ma qaboojiso oo aan wax u dhicin horumarinta warshadda.
Ku dhufashada Jerusalem artichoke ee qiyaasta warshadaha waxaa lagu sameeyey oo kaliya digriiga. Qiyaasta beeritaanka 1 ha waxay ku xiran tahay qaabka beeritaanka iyo qiyaasta digriiga beerto. Celcelis ahaan, 1-1.2 ton oo digriiga ah ayaa lagu beeray hektar. Haddii aad u baahato inaad hesho digir farabadan oo waaweyn, ka dibna dhulku waa inuu yaraa (90x25 cm), haddii aad u baahato tiro badan oo cagaaran, ka dibna samee isdhaafsasho adag oo safafka ah oo hoos u dhig qaybta safka safka ilaa 70 ama 60 cm.
Si looga hortago horumarinta haramaha, ka hor inta aan la soo saarin caleemaha waxaa lagu talinayaa in ay fuliyaan hal ama laba goor.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha, waxaa lagula talinayaa in lagu beero inta u dhaxaysa safka iyo dhirta. Daryeel dheeraad ah ee beeritaanka sanadka ugu horeeya ee beerto waxay ka kooban tahay loosening of spaced iyo burburinta haramaha ee saf.
Wixii beerashada ee isdabajoogga on miisaan warshadeed u baahan tahay tractor ahsi loo beero dhulka, iyo baradhada baradho ah ee beergooyska. Tirada shaqooyinka waxay ku xirnaan doontaa tirada qaybaha qalabka, hal shaqaale wuxuu ku lug yeelan karaa dhowr geedi socod oo lagu fuliyey muddooyin kala duwan oo ah horumarinta dhirta.
Kharashka shaqada ee wax soo saarka artichoke Yeruusaalem waa ku dhowaad eber, tan, sida uu qabo fiisooyinka la yaab leh V.I. Kozlovsky, "waa geedka kaliya ee beeraha oo dhan, taas oo ku dhowaato foosha, ma cabsiiseynin barafka, neefka, roobka, ama carrada xun, oo aan ciqaabinaynin dayacaadda shaqada xagaaga."
Si aad u diiwaangeliso hay'ad sharci ah si aad u abuurto ganacsi kuu gaar ah, waxaad u baahan tahay:
Abuuritaanka magaca shirkadda shirkadda, ee aan ahayn lid ku ah sharciga;
go'aamiyaan cinwaanka sharciga ah;
dooro furayaasha OKVED;
go'aamiyo tirada saamiyada raasamaalka;
dejiyaan go'aanka aasaasaha ama daqiiqadaha shirka guud iyo heshiiska ku saabsan dhisitaanka LLC;
diyaariso axdiga ururka;
qori arjiga diiwaangelinta gobolka;
bixinta qarashka gobolka (4000 ruqiis);
U dir dhammaan dokumantiyada cashuurta kormeerka.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga, halkaasoo horay loogu soo bandhigay fikrado ganacsi oo ku saabsan beerista Jerusalem artichoke:
Khaladaadka iyo xalka
Khaladaad Siyaabaha looga hortago khaladaadka
Beerta dhoobo, taas oo horseedaysa hoos u dhaca dhalidda ee digriiga Khudradda khafiifinta ah ee gaadhay heerkul dhan 10 cm.
Qashinka hawada ee cufan ayaa lagu sameeyay dusha ciidda. Fudud oo dabacsan si waafaqsan cab.
Duufaanku ma biya Xoollada Topinambur waxay u baahan yihiin waraabin badan oo ah ugu yaraan 1 jeer bishiiba.
Geedaha ma quudiyo Quudinta Topinambur waa in la sameeyaa 2-3 jeer. Guga hore iyo qeybtii dambe ee xagaaga:
Xilliga dayrta qaybta above ee geedka ayaa la jaraa. Xilliga dayrta, qaybta kor ku xusan waa mid aan la jarin ilaa goynta, maaddaama ay kor u qaaddo nafaqooyinka ee digriiga, kuwaas oo ka tagay dhulka ku xiga sanadka soo socda.
Isagelinta isdabajooga dhulka, waxay kuxirantahay kala duwanaanshaha, laga bilaabo Sebtembar ilaa Nofembar. Ka hor inta nadiifin, gooyaa dushooda at height ah 15-17 cm. Marka qodaya miraha waxaa loo doortay digriiga ugu weyn, ka dibna waxay u baahan yihiin in la maydho, la qalajiyo, lakulay, rusheeyey ciid qoyan ama balka, oo lagu hayaa qaboojiye qabow, oo la socda xaaladaha kaydinta: 85-95% qoyaan iyo heerkul +4 digrii.
Digriiga Jerusalem artichoke waxaa lagu kaydin karaa balakoonka kulul, qaboojiyaha, laakiin mudada kaydinta waa yar yar - 2-3 toddobaad. Qiyaas ahaan hal sano, miraha la jarjaray ayaa lagu keydin karaa qaabka la qalajiyey.
Warshadani waa wax yar u nugul cudurada iyo cayayaanka. Laakiin xilliga xagaaga ee qallalan ama qabow iyo roobabku way jirran karaan:
kalluun cad (on the afkoda dareemay ubaxyada, isu beddelaya koritaanka ee midab madow);
Alternaria (caleemaha waxaa lagu daboolay dhibco madow oo madow, ka dibna dhirta dhoobo);
xayrta maqaarka (caleemaha ayaa si tartiib ah u daboolan leh ubaxyo baraf ah oo bunni ah).
Waxaa jira laba siyaabood oo lagula dagaallamo cuduradan: jarida iyo gubista dhirta ama mar ama laba jeer dhirta lagu sameeyo fungicides ee hawada diiran.
Pear Earth ayaa waxyeeli kara:
Lamaanood iyo maydka laga yaabo.
Si aad iyaga loola dagaallamo, waxaad isticmaali kartaa xalka saabuunta diirran, faleebo toon. Slugs waxay u baahan yihiin in la isu geeyo gacanta ama la dhigo inta u dhaxeysa safka dabka.
Warshad cajiib ah ee Jerusalem artichoke ayaa si tartiib ah ugu guulaysatay beeraha dalkiisa, iyo qabsashada, caabbinta cudurada iyo wax-soosaarkooda sare waxay siin doonaan dhirta mustaqbalka dhaw oo dhow.